Macquul ma’ahan: David Beckham oo 175 milyan euro ku qaadanaya inuu noqdo wajiga Koobka Adduunka 2022… (Maxay tahay shaqada uu qaban doono isaga?) – Gool FM
Ahmed Nur October 25, 2021
(Qatar) 25 Okt 2021. David Beckham ayaa qarka u saaran inuu noqdo wajiga uu dalka Qatar u isticmaali doono Koobka Adduunka ee sanadka 2022 lagu qaban doono dalkaas, waxaana uu sidoo kale safiir u noqon doonaa Qatar 10-ka sano ee soo socoto isagoo qandaraaskaas ku qaadanaya 175 milyan oo euro.
Koobka Adduunka ee soo socda ayaa noqon doona mid taariikhi ah maadaama markii ugu horreysay dhacdadan caalamiga ah la qaban doono xilligi jiilaalka qaaradda Yurub ama bilaha November iyo December.
Shaqada Beckham ee buun-buunita ayaa ah inuu soo bandhigo sida uu dalka Qatar ugu wacan yahay dalxiiska iyo waxyaabaha dhaqanka la xiriira waxaana ole’olahaas ku wehlin doona halyeeyada kubadda cagta ee Xavi Hernandez, Samuel Eto’o, Cafu, Ronald de Boer iyo Tim Cahill.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda carbeed ayaa halyeyga Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska isla markaasna usoo ciyaaray kooxo dhowr ah oo ay Real Madrid iyo AC Milan ku jiraan inuu yahay calaamad ganacsi oo awood badan isla markaasna gadi kara dalkooda.
Kaddib tagitaankii Sergio Ramos, Real Madrid oo xagaagii labaad oo xiriir ah weyneyso HALYEY kaddib markii uu Marcelo sheegay inuu...